५५ सडकमा यातायात अवरुद्ध- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
५५ सडकमा यातायात अवरुद्ध
‘सबै ग्रामीण भेगका कच्ची सडक बर्खासँगै बन्द छन्, जहाँतहीँ वर्षात्ले पहिरो जाने,भास्सिने भइरहेको छ’
भाद्र १२, २०७५ अनिश तिवारी
सिन्धुपाल्चोक — पहिरोले बन्द ग्रामीण भेगका सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । दुर्गम गाउँ पुग्ने सडक चल्न नसक्दा यात्रु सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
अविरल वर्षाका कारण बढेको खोलाले अवरुद्ध बनाएपछि ठप्प सिन्धुपाल्चोक सुनकोसी गाउँपालिकाअन्तर्गतको ग्रामीण सडकखण्ड । तस्बिर : अनिश
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार सदरमुकामबाट गाउँ जोड्ने ५५ सडकमध्ये प्राय:मा यातायात अवरुद्ध छन् ।
जिल्लामा २५ सय किमि ग्रामीण सडकमा पाँच सय किमि ग्राभेल र अन्य प्रमुख सडकमा दुई सय किमि कालोपत्रे गरिएको छ । ‘सबै ग्रामीण भेगका कच्ची सडक बर्खासँगै बन्द छन्, जहाँतहीँ वर्षातले पहिरो जाने, भास्सिने भइरहेको छ,’ चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अशोक तिवारीले भने । उनले नयाँ खुलेका सडकदेखि अरनिको राजमार्गको सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा समेत पहिरोले बगाएपछि सवारीसाधन बन्द भएको सुनाए ।
जिल्लाका उत्तरपूर्वी भेगका सबै ग्रामीण सडक पनि खुल्न सकेका छैनन् । भोटेकोसी गाउँपालिको मार्मिङ, तातोपानी, लिस्तीकोट, फुल्पिङकट्टीका गाउँमा पुग्ने सबै सडक वर्षासँगै पहिरोले पुरिएका छन् । भूकम्पले छियाछिया बनाएकाले सीमावर्ती गाउँका सडकमा पैदल यात्रासमेत जोखिमपूर्ण छ ।
बाह्रबिसे–तातोपानी २६ किमिको दूरी छ । यही राजमार्गकै दसकिलो, सिरिसे, जम्बु, झिर्पू, डाँकालाङ, कोदारीजस्ता स्थानमा वर्षासँगै पुराना पहिरो फेरि खस्न थालेका छन् ।
अरनिको राजमार्गकै जुरे, बलेफीमा अझै सुक्खा पहिरो रोकिएको छैन । ‘यातायात त टाढाको कुरा, पैदल यात्रासमेत सम्भव छैन्,’ भोटेकोसी गाउँपालिका फुल्पिङकट्टी झिर्पु हिन्दीका शम्भु पौडेलले भने, ‘बर्खा लागेपछि यहाँका गाउँका सबै सडक सुक्खा पहिरोले बन्द हुन्छन् , बर्सेनि मर्मत गरिए पनि मर्मत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ भोटेकोसी बाढीले कटानमा पारेको कोदारी राजमार्गको लिपिङ बजारदेखि अरनिको राजमार्गको जुरेसम्म चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीआरसीसीले पुनर्निर्माण गरेको थियो ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको पिस्कर, चोकटी, घोर्थली पुग्ने सडक वर्षाले भास्सिएर बन्द भएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिका अन्र्तगतका गाती, घुम्थाङ, कर्थली, राम्चेदेखि इन्द्रावती गाउँपालिकाको माझीगाउँ जोड्ने ग्रामीण सडक हिलो, पहिरोले अवरुद्ध बनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:५३
घाइतेलाई सरकारीमा लैजाने निर्णय
‘सरकारीमा लग्यो त्यहींकै डाक्टरले आफ्नो निजी निर्सिङ होममा बोलाउनुहुन्छ’
भाद्र १२, २०७५ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पुर्‍याउने परिपाटी बसाउन चितवन जिल्ला प्रशासन सक्रिय भएको छ ।
चितवनको भरतपुर अस्पताल । तस्बिर : रमेशकुमार
जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको सोमबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा घाइते बोकेर आउने एम्बुलेन्स सिधै सरकारी अस्पताल लैजाने निर्णय भएको छ । ‘त्यसो नगर्ने एम्बुलेन्स कारबाहीमा पर्ने छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बैठकमा भने ।
भरतपुर अस्पतालमा पूर्वाधार र चिकित्सक भए पनि घाइतेलाई निजी मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा लैजाने गरेकोबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘दुर्घटनाका घाइतेहरू भरतपुर अस्पतालमा ल्याउँदै नल्याउने परिपाटी देख्दा अचम्म परेको छु,’ भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा.रविन खडकाले भने ।
दुर्घटनाका घाइतेका लागि उपचार सुविधा भरतपुर अस्पतालमा भएको उनले बताए । ‘भरतपुर अस्पतालमा न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ । स्पाइनल सर्जनसहित सात जना अर्थोपेडिक (हाडजोर्नी) सर्जन हुन हुन्छ । पूर्वाधार पनि छ,’ डा.खडकाले भने ।
अस्पतालमा घाइतेहरू आपत्कालीन अवस्थामा आए उपचार सुरु गर्न तत्कालै हेर्ने समूह (क्यूआरटी) रहेको उनले बताए । डा. सुरेश प्रधानको नेतृत्वमा आपत्कालीन उपचार टिम अस्पतालमा रहेको उनले बताए ।
छाती र मुटुको समस्याको उपचार हुन केही गाह्रो भए पनि दुर्घटनासँग सम्बन्धित अन्य चोटपटकको राम्रो उपचार भरतपुरको सरकारी अस्पतालमै हुने उनले बताए । तर दुर्घटना भएका सबै बिरामी निजी अस्पतालमा मात्रै गएको देखियो । यो के कसरी रोक्नेभन्दा एम्बुलेन्सलाई अनिवार्य सरकारी अस्पतालमा नै ल्याउनुपर्छ भनिएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने । यो निर्णयपछि भरतपुर अस्पतालले रिफर गरेमा मात्रै बिरामीहरू अन्य अस्पतालमा जाने छन् ।
कमिसन र व्यवहार समस्या
सरकारी अस्पतालमा घाइते नजानुमा एम्बुलेन्सको मात्रै कमजोरी नरहेको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताए । ‘तपाईंहरूले गरेको निर्णय मान्न हामी तयार छौं । तर चालकका कारणले मात्रै घाइतेहरू निजीमा गएका हैनन्,’ लामिछानेले बैठकमा भने, ‘कमिसन र सरकारी अस्पतालका चिकित्सकको व्यवहार पनि दोषी छ ।’
अध्यक्ष लामिछानेले भरतपुर अस्पतालकै एकजना अर्थोपेडिक सर्जनले एम्बुलेन्समा जाने बिरामीलाई आफ्नो निजी अस्पतालमा बोलाउने गरेको बताए । ‘तपाईंहरू सरकारीमा ल्याऊ भन्नुहुन्छ । तर सरकारीमा लग्यो त्यही कै डाक्टरले आफ्नो निजी निर्सिङ होममा बोलाउनुहुन्छ । त्यहाँ उपचार नभए काठमाडौंको निजीमै रिफर गर्न हुन्छ,’ लामिछानेले भने ।
बैठकमा भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा.रविन खडकाले यस्ता कमजोरीहरू अब नहुने बताए । पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिनजस्ता व्यस्त सडकले घेरिएको चितवनमा दिनदिनै जसो दुर्घटना हुने गर्छ ।
चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुर्घटनामा गत आवमा १ सय ३२ जनाको मृत्यु, ५ सय २९ घाइते भएका थिए । साउनमा ८७ घाइते र २१ जनाको निधन भएको छ । बाहिरी जिल्लाका घाइते पनि उपचारका लागि यहाँ आउँछन् ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:५२
त्रिभुवन राजपथमा २ वटा गाडीमा आगजनी
संघीय कानुन बाझिने गरी ऐन
प्रदेश सभा ३ मा पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास
चन्दलाई मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ : गृहमन्त्री
डा. प्रह्लाद योञ्जन रेडपाण्डा पदमार्ग
मधु राई वैशाख ४, २०७६
प्रा ध्यापक कृष्णबहादुर भट्टचन यौन दुर्व्यवहारको भुमरीमा परेयता जनजाति समुदाय र जातीय संघसंस्थालाई नराम्रो झट्का लागेको हुनुपर्छ । किनभने, आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई पहिचानसँग जोडेर राष्ट्रिय तथा...
अमेरिकी नेतृत्वले नबुझेको नेपाल
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ वैशाख ४, २०७६
नेपाल र अमेरिकाबीच १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीच आपसी सम्बन्धको ग्राफ नित्य बढिरहेको छ । अमेरिकाले ७२ वर्षयता नेपालसँगको सम्बन्धलाई...
सम्पादकीय वैशाख ४, २०७६
पत्रकारलाई कसरी हुन्छ, कस्दै जाने मानसिकता राज्यका निकायहरूमा बढ्दै गएको छ । त्यसको बलियो औजार भएको छ, विद्युतीय कारोबार ऐन । कुनै पत्रिकामा छापिएको समाचारमा सोझै हात...